Airbus A319 Jet airliner Interior Private Jet Charter Flight Service maka azụmahịa ma ọ bụ Ikpeazụ nkeji ọnụ onye Aircraft ụgbọelu ụgbọelu Rental Company m nso maka gị ọzọ njem ebe on ufọt ufọt size deadhead pilot efu ụkwụ quote nọ n'ógbè gị.
The Airbus ACJ319 Aerospace Private Jet Charter bụ azụmahịa na klas ugbo elu. Ya imewe dabeere na A320 azụmahịa airliners. The ụgbọelu ke ẹkenam ke 1997 na atụmatụ extra mmanụ ụgbọala tankị karịa mbụ A319. Nke a pụtara ụgbọelu nwere ike ịga njem ogologo anya nke 6000 nm ma ọ bụ 6,905 kilomita. Ọ na a ejikwara site n'akwụkwọ iwu sịrị na nnukwu ụlọ ọrụ ekele ya nnukwu nso nke azụmahịa na klas atụmatụ.
Ọzọ Service Anyị na-Dọhọ mgbe ọ na-abịa ikuku nsoro Transportation Service gị nso.
The ime nke ACJ319 dị obosara ma na àjà ihe ọṅụṅụ n'oge a, ka o ezigbo maka ụgbọ njem VIPs na njem azụmahịa. The ụgbọelu na-abịa na ọtụtụ ngalaba, nke nwee njem iji zuru ike na-nwe ụlọ ensuite ụlọ ịwụ, ekiri fim na ezumike ebe, na-eduzi ọmụmụ ihe ma ọ bụ na-eri nri na iri ebe. Ọ obụrede mbụre kasị ulo cross-ngalaba na ya na klas na-enye enweghị atụ okomoko. The n'akwụkwọ iwu ụgbọelu awade a nkịtị kokpiiti na ala-nke-na-art atụmatụ.
The interiors bụ n'ụzọ zuru ezu customizable ona kpọmkwem ụlọ chọrọ. Ọ nwere a butụrụ ibu mkpara ebe na mîdaha ofufe-site-waya njikwa.
Airbus ụgbọelu A319 Interest site Subregion
Ọ na-abịa dị ka ọ na anya na Airbus ACJ319 bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu ugbo elu na ACJ ezinụlọ. Ọ na-enye ezigbo Nchikota nso, okomoko na a saa mbara ụlọ. Ọ nwere ike ịga njem si Cape Town na South Africa na Dubai ma ọ bụ site na Las Vegas ka London na-enweghị mkpa gbanye mmanu. Nke a na-enye nnọọ mkpa mgbanwe uloru amalite njem azụmahịa n'akụkụ dị iche iche nke ụwa.
The ụgbọelu na-anọchi anya a dara oké ọnụ ma na-akwadebeghị efe efe ụlọ ọrụ maka ọrụ n'aka ndị ọchụ nta ego. Ọ bụ ihe dị mkpa ahịa na ngwá ọrụ kwesịrị elu-profaịlụ ọnọdụ na ùgwù nke nnukwu ụlọ ọrụ na isi nke obodo.
The ụgbọelu ike ịba ruo 50 njem. Ọ na-awade ọzọ nhazi nhọrọ iji kwekọọ ná mkpa nke rụọ. The ACJ319 nwere ikike ife ọsọsọ na elu karị, otú mbenata ụgbọ elu oge.
Airbus A319 Jet airliner okomoko Interior Private Jet Charter Flight Service #emptyleg #Jetcharter #emptylegs #wysluxury # AirbusA319Jetairliner # airbusa319 # airbusa319seating # airbusindustriea319 # a319airbus #Luxuries #lifestyle #travel
A post na-akọrọ site WysLuxury JetCharter (@wysluxury) on Oct 11, 2017 na 8:09am PDT
Private Jet Aircraft Charter Hawaii ụgbọelu Rental Company Near Me